HERINANDRO MASINA 2017: ALAHADY, ANDRO VOALOHANY 16/04/2017 Fiangonana Loterana Malagasy FLM Orleans
HERINANDRO MASINA 2017: Alahady 16/04/2017 ANDRO VOALOHANY
NDAO HANARAKA NY DIAN’I JESOSY ISIKA (ALAHADY ANDRO VOALOHANY)
“RAVEHIVAVY, NAHOANA IANAO NO MITOMANY?” (Jao 20:13)
Tonga ny faratampon’ny herinandro masina tamin’ny nitsangana’i Jesosy tamin’ny maty ny alahady maraina. Raha mbola niery sy natahotra ny mpianatra ary mbola nisaintsaina tsara izay niseho tamin’i Jesosy dia tonga kosa ny andro voalohany amin’ny herinandro izay nitondra fiovam-penitra mahery vaika. Vehivavy vitsivitsy no nanana herimpo nankany am-pasana mba hikarakara ny fatin’i Jesosy. Isan’ny voalaza anarana i Maria Magdalena, Maria renin’i Jakoba, Joana ary Salome.
Gaga anefa izy ireo raha nahita ny varavaram-pasana efa voakodia. Sady gaga no nalahelo i Maria raha nahita izany ka nitomany teo amin’ny varavaram-pasana no sady nijery tao anatiny mba hahita izay niseho marina. Tamin’izany indrindra no nahitany ireo anjely roa nipetraka teo amin’ny toerana natorian’i Jesosy, ny iray teo an-dohany ary ny iray teo an-tongony.
Nanontany an’i Maria izy ireo hoe “RAVEHIVAVY, NAHOANA IANAO NO MITOMANY?” Tsy mbola tonga saina ihany i Maria ka noheveriny fa nisy nangalatra ny fatin’i Jesosy. Tamin’izay indrindra izy raha nitodika no nahita an’i Jesosy nitsangana teo nefa tsy mbola fantany ihany fa i Jesosy izany. Dia naverin’i Jesosy indray ilay fanontaniana teo: “RAVEHIVAVY, NAHOANA IANAO NO MITOMANY?” Tamin’izay vao nisokatra ny sainy ka fantany fa i Jesosy ity velona sy miresaka aminy ity.
Nentin’ny hafaliana ka niantsambotra i Maria saika hanatona sy hikasika an’i Jesosy nefa tsy navelan’i Jesosy hanao izany izy satria nolazainy fa tsy mbola niakatra nankany amin’ny Rainy Izy.
Inona no hevitr’izany? Vita ny asam-pisoloana nataon’i Jesosy, nitsangana amin’ny maty Izy izao nefa mila miakatra mankany amin’ny Ray manao tatitra sy milaza fa vita ny asa nanirahana Azy mba hanomezan’ny Ray voninahitra Azy. I Tomasy dia nasain’i Jesosy nikasika sy nitsapa ny tànany satria tsy mety nino izy sady efa avy tany amin’ny Rainy Izy. I Maria kosa tsy navelany satria izy tonga dia nino nefa Izy tsy mbola niakatra tany amin’ny Ray.
Tsy azontsika afangaro amin’ilay tena fiakarany tany an-danitra (ascension) ity fiakarany taorian’ny nitsanganany ity. Taorian’ity fiakarany ity no nahazoany ny tena araka ny fomban’ny fanahy (araka ny fampianaran’i Paoly dia hahazo izany vatana izany koa isika rehefa amin’ny fiavian’i Jesosy fanindroany). Raha tadidintsika dia nanana vatana hafa tsy toy ny teo aloha intsony Izy rehefa nitsangana, tsy nahasakana Azy ny varavarana mirindrina, io ilay vatana araka ny fomban’ny fanahy.
Taorian’ny nitsanganany dia niseho matetika tamin’ny mpianany Izy, ny mahasamihafa azy anefa dia tsy toy ny fiarahany tamin’ny mpianatra teo aloha intsony izany, tsy ety an-tany intsony ny tranony fa niverina tany amin’ny fitoerany hatramin’izay Izy dia ny lanitra. Nambarany mazava tamin’ny mpianatra fa efa nolazainy taminy izany tsy maintsy hahafatesany sy hitsanganany izany.
Tanteraka izany na dia tsy takatry ny mpianatra aza, nosokafin’i Jesosy ny masony sy ny sainy ka fantany amin’izay fa tena nitsangana tamin’ny maty tokoa Izy.
LESONA HO ANTSIKA ANKEHITRINY:
Nanaitra ahy manokana ny fanontanian’i Jesosy tamin’i Maria hoe: “nahoana ianao no mitomany?”
Raha atao amin’ny fomba hafa dia hoe: “tsy misy antony tokony hampitomany anao na dia kely aza, fa matoa ianao mitomany dia satria misy zavatra tsy takatrao.”
Mampalahelo fa maro ny mpino no mbola mitomany, mitanondrika, very hevitra eo anoloan’ny fasam-pandresena. Maro ireo “fasana” mampatahotra antsika, maro ny lany andro mitomany sy ampahorian’ny tahotra sy ahiahy ka fadiranovana loatra.
“Nahoana ianao no mitomany?” “Izaho ihany ity” hoy i Jesosy, eo akaikinao Izy, raha inoanao fa velona Izy dia tsy misy tokony hampitomany na dia kely aza. Rehefa kivy sy manana olana isika dia matetika tehiverina any amin’ny fasam-paharesena ka mitolefika sy mitomany.
Tsy ao intsony i Jesosy. Velona Izy ka velona ianao; Hampandresy anao no nitsanganany. Mialà eo am-pasana amin’izay, fafao ny ranomaso, tsy eo am-pasana ny toeranao, fa tadidio ny tenin’i Jesosy hoe “fa mandehana mankany amin’ny rahalahiko, ka lazao aminy hoe: Miakatra ho any amin’ny Raiko sy ny Rainareo Aho, ary ho any amin’Andriamanitro sy Andriamanitrareo.” (Jao 20:17) Tsy ny “hitomany” akory no niantsoana anao fa ny “handeha” any amin’izao tontolo ka hilaza fa EFA NITSANGANA I JESOSY ho famonjena ny mpanota.
AHARABAINA TRATRY NY PASKA!
Mat 28:1-13, Mar 16:1-14, Lio 24:1-49, Jao 20:1-23.
Pastora RANDRIANJAKA Olivier,
Mpampianatra ao amin’ny SALT (Sekoly Ambony Loterana momba ny Teolojia)